आज हामिले निकै नै कमेडी खालको एक भिडियो देखाउन गएका छौ । तँपाईहरु त्यो भिडियो हेरेर अति होईन एकदुम संगले हाँस्नुहुने छ । हल्का रमाईलो को लागि मात्रै हो । हेर्नुहोस हाँस्नुहोस र अरुलाई पनि हँसाउनुहोस । आज हल्का मुड फ्रेस गर्नुहोस ।
रमाईलो छ भिडियो अनि त्यो कमेडी भिडियो हेरी पेट मिचिमिची हाँसेर मात्रै भएन नि त्यो हेरेर अरुलाई पनि हँसाउनुहोस । अरुलाई हँसाउन को लागि तल देखाईएको सेयर बटम मा छोएर आँफ्नो फेसबुक वाल मा पनि सेयर गर्न पर्नी हुन्छ बल्ल हरुले हरु अरुलाई पनि हँसाउन सक्नुहुन्छ ।
अनि यो मनोरञ्जन लिएर हजुलाई कस्तो लाग्छ ? कति हाँस्नुभयो कि हाँसो लागेन त्यो पनि हामिलाई भन्नुपर्ने हुन्छ तेसैले तल गएर आ-आफ्नो कमेन्ट बक्स मा छुच्चो नमानी कमेन्ट पनि दिनुहोला । फेरि भिडियो हेर्नी कमेन्ट चै बिर्सनी होला । त्यो बिर्सन भएन है लौ भिडियो हेर्न तल किल्क गर्नुहोला भिडियो मज्जाले चल्छ ।
भिडियो चै तल छ है…. यो माथिको त फोटो हो फेरि फोटो मा छोएर भिडियो चलेन भनेर झुक्याएर छोड्यो भनेर रिसाउनुहोला नि बरै तेस्तो छैन तल छ हेर्नुहोस त
Prevनेपालगन्जका ब्यापारीहरु भन्छन् ‘नेपाल-भारत सिमा अझ कडाइका साथ सिल गरौं’
Nextसाउदीमा अलपत्र नेपालि भन्छन १० दिनदेखि भोकै छु रोडमै सुतेको छु दूतावासले वास्तै गर्दैन